Faahfaahin: Dhaawaca Wasiirka Dhalinyarada iyo Cayaaraha Jubaland | Jubbaland Media Online
Faahfaahin: Dhaawaca Wasiirka Dhalinyarada iyo Cayaaraha Jubaland
Posted on June 22, 2017 in Feat, Wararka // 0 Comments
Wasiirka dhalinyarada iyo cayaaraha dowlad goboleedka Jubaland Sheekh Max’ed Awlibaax oo uu maanta dhaawac kasoo gaaray qarax ka dhacay Muqdisho ayaa haatan lagu daweeynayaa Isbitalka Digfeer ee magaalada Muqdisho.
Xildhibaan Max’ed Daa’uud Cumar (Codweeyne) oo la joogay Wasiirka markii uu shilku dhacayay ayaa sheegay in haatan wasiirka uu ku jiro qeybta emergencyga ee isbitalka Digfeer, halkaa oo lagu daweeynayo.
Waxa uu sheegay in dhaawaca uu yahay firir wasiirka ka galay madaxa, dhaqaatiirtuna ay la tacaalayaan sidii ay uga soo saari lahaayeen.
“Walaalow wasiirka qeybta Emergency-ga ayuu ku jiraa, xaaladdiisa sidii aan moodeeynay hada way yara dhaantaa, dhaqaatiirtu waxay xoogga saarayaan in ay daweeyaan,” ayuu xildhibaanku hadalkiisii raaciyay.
Iska ku hay Jubaland Media si aad u hesho warar xaqiiq ah;